Maxaa ka jira in ciidanka Abuu Mansuur ay dhaawaceen Amiir ku-xigeenka Al-shabaab? | Arrimaha Bulshada
Home News Maxaa ka jira in ciidanka Abuu Mansuur ay dhaawaceen Amiir ku-xigeenka Al-shabaab?
Maxaa ka jira in ciidanka Abuu Mansuur ay dhaawaceen Amiir ku-xigeenka Al-shabaab?
Bulsha:- Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar mar kale Al-Shababa shalay ku qaaday aagga uu ku sugan yahay wadaadka gooni u goosadka ah Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Maleeshyada daacada u ah Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ay jimcihii dhaawaceen Ku xigeenka Hogaamiyaha Al-shabaab Mahad Warsame Qaley oo loo yaqaano (Mahad Karataay) ka dib markii uu dagaal ku dhex maray Gobolka Bakool.
Inta la ogyahay dagaalka dhexmaray Al-shabaab iyo Mukhtaar Roobow Cali Abuu Manuur ayaa waxaa ku dhintay in ka bada 20-Qof halka tiro intaasi ka badana ay ku dhaawacmeen.
Warar madax bannaan, ayaa sheegaya in qayb ka mid ah maleeshiyada Shabaab, ay dib uga gurteen deegaankii lagu dagaalamay, markii uu lugta ka dhaawacmay Mahad Karataay, oo ururka dhexdiisa looga yeero Abuu C/raxmaan.
Wasiir Xasan Eelaay, ayaa Jimcihii ku celiyay in mowqifka Dowladda Dhexe iyo kan Koonfur Galbeedba uu yahay in la soo dhaweeyo cid kasta oo ka tanaasusha fekerka khalafsan ee Shabaabnimada.